မြန်မာဆယ်လီ သတင်းထူးများ - ဆယ်လီအကြောင်း အကုန်သိ
သူမအကြောင်း မဟုတ်မမှန်တာလိုက်ပြောပြီး သိက္ခာချထားတဲ့ ကိစ္စအတွက် တစုံတယောက်ကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာရဲရင် ပြန်လာဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ…. သူမအကြောင်း မဟုတ်မမှန်တာလိုက်ပြောပြီး သိက္ခာချထားတဲ့ ကိစ္စအတွက် တစုံတယောက်ကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာရဲရင် ပြန်လာဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့
နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလေး တစ်ယောက်အလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ဖက်ရှင် အလန်းလေးနဲ့ အထာကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း
သူမကို သားဖြစ်သူ ဂျက်ဂျက်ခေါ်တဲ့နာမည်ဆန်းလေးကြောင့် သဘောကျနေတဲ့ မေမေနန်းမြတ်ဖြိုးသင်း…
မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မကဘဲ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာလဲ အိမ်အကောင်းစားကြီးနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်…
သူမအကြောင်း မဟုတ်မမှန်တာလိုက်ပြောပြီး သိက္ခာချထားတဲ့ ကိစ္စအတွက် တစုံတယောက်ကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာရဲရင် ပြန်လာဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ….
442 | 19/01/2022
သူမအကြောင်း မဟုတ်မမှန်တာလိုက်ပြောပြီး သိက္ခာချထားတဲ့ ကိစ္စအတွက် တစုံတယောက်ကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာရဲရင် ပြန်လာဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ…. ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာကတော့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာလောက ကနေအပြီးတိုင် အနားယူသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီအစ်မတွေနဲ့အတူ ဖွင့်ထားတဲ့ ပိုးထည်ဆိုင်ကို ဦးစီးနေပြီး ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း အနုပညာ မလုပ်တော့ပေမယ့်လည်း
နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလေး တစ်ယောက်အလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ဖက်ရှင် အလန်းလေးနဲ့ အထာကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း အဆိုတော် ရေဗက္ကာဝင်းကတော့ ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရေဗက္ကာဝင်းရဲ့သီချင်းဟောင်းလေးတွေကလည်း နားထောင်လို့ ကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားလို့ ပရိသတ်တွေက ကြိုက်နှစ်သက်နေကြတာပါနော်။ ရေဗက္ကာဝင်းက ချစ်မွှေးပါတဲ့ မျက်နှာလှလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် အသံလေးကလည်း အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ် ။အခုချိန်ထိလည်း
သူမကို သားဖြစ်သူ ဂျက်ဂျက်ခေါ်တဲ့နာမည်ဆန်းလေးကြောင့် သဘောကျနေတဲ့ မေမေနန်းမြတ်ဖြိုးသင်း… နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက သူမရဲ့ ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ အမူအရာများနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ညှို့ယူဖမ်းစားထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမက အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့လည်း သူမကို အိမ်ထောင်ကျသွားသည့်တိုင် အဆက်မပြတ် ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားနဲ့ သမီးရဲ့ ချစ်စရာ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း အမြဲလိုလို မှတ်တမ်း တင်လေ့ရှိပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မကဘဲ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာလဲ အိမ်အကောင်းစားကြီးနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်… ပရိသတ်ကြီးရေ စမိုင်းလ်တို့ မိသားစုကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကနေ စွန့်ခွာပြီး ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ဘာမှ မတင်တော့ဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေထိုင်လျက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ကတော့ တစ်ချိန်ကရဲရဲတောက်ခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့
စစ်ရှောင်စခန်းပါမချန်လုပ်ရက်တဲ့လူမဆန်တဲ့ယုတ်ညံ့မှူတွေကြောင့် တမြေတည်းတရေတည်းမှာ ဒီလိုလူတွေနဲ့အတူ လူလာဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခကို ရင်ဖွင့်ရေးသားလာတဲ့ ချစ်သုဝေ…
442 | 18/01/2022
စစ်ရှောင်စခန်းပါမချန်လုပ်ရက်တဲ့လူမဆန်တဲ့ယုတ်ညံ့မှူတွေကြောင့် တမြေတည်းတရေတည်းမှာ ဒီလိုလူတွေနဲ့အတူ လူလာဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခကို ရင်ဖွင့်ရေးသားလာတဲ့ ချစ်သုဝေ… သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅က၊ဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကစကစရဲ့ယုတ်မာမှုတွေကိုအခုလိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကနေအိမ်ပျောက်၊အနာဂတ်ဝေဝါး၊ခဏတာခိုရတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းပါမချန်လုပ်ရက်တဲ့လူမဆန်တဲ့ယုတ်ညံ့မှူကမနည်းမနောပဲပါလားကွယ်ရို့၊အဲ့ဒါကျရောဘယ်ခေါင်စဉ်အောက်ထည့်ပြီးcoverလုပ်ကြမလဲဟေ၊ပြည်သူတွေဟ၊အရွယ်စုံလို့ရင်ခွင်ပိုက်ရော၊သက်ကြီးဖိုးဖွားရော၊ တမြေတည်းလူလာဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေများကွာဆိုပြီးသူမရဲ့InstagramStoryမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ crd Unicode သရုပျဆောငျခဈြသုဝကေတော့တျောလှနျရေးကွီးမှာပွညျသူတှနေဲ့အတူပါဝငျပွီးလမျးထှကျကာလူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားတကျသရောပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ပုဒျမ၅၀၅က၊ဖွငျ့မတရားအမှုဖှငျ့ထားခွငျးခံရပွီးဘေးကငျးရာကိုရှောငျတိမျးနရေပါတယျနျော။ အခုတဈခါမှာဆိုရငျသရုပျဆောငျခဈြသုဝကေစကစရဲ့ယုတျမာမှုတှကေိုအခုလိုရငျဖှငျ့ပွောပွလာခဲ့ပါတယျနျော။သရုပျဆောငျခဈြသုဝကေနအေိမျပြောကျ၊အနာဂတျဝဝေါး၊ခဏတာခိုရတဲ့စဈရှောငျစခနျးပါမခနျြလုပျရကျတဲ့လူမဆနျတဲ့ယုတျညံ့မှူကမနညျးမနောပဲပါလားကှယျရို့၊ အဲ့ဒါကရြောဘယျခေါငျစဥျအောကျထညျ့ပွီးcoverလုပျကွမလဲဟေ၊ပွညျသူတှဟေ၊အရှယျစုံလို့ရငျခှငျပိုကျရော၊သကျကွီးဖိုးဖှားရော၊တမွတေညျးလူလာဖွဈရတဲ့ဒုက်ခတှမြေားကှာဆိုပွီးသူမရဲ့InstagramStoryမှာရေးသားဖျောပွထားပါတယျ၊စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျပွနျလညျမြှဝတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။ crd သရုပျဆောငျခဈြသုဝကေတော့တျောလှနျရေးကွီးမှာပွညျသူတှနေဲ့အတူပါဝငျပွီးလမျးထှကျကာလူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားတကျသရောပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ပုဒျမ၅၀၅က၊ဖွငျ့မတရားအမှုဖှငျ့ထားခွငျးခံရပွီးဘေးကငျးရာကိုရှောငျတိမျးနရေပါတယျနျော။ အခုတဈခါမှာဆိုရငျသရုပျဆောငျခဈြသုဝကေစကစရဲ့ယုတျမာမှုတှကေိုအခုလိုရငျဖှငျ့ပွောပွလာခဲ့ပါတယျနျော။သရုပျဆောငျခဈြသုဝကေနအေိမျပြောကျ၊အနာဂတျဝဝေါး၊ခဏတာခိုရတဲ့စဈရှောငျစခနျးပါမခနျြလုပျရကျတဲ့လူမဆနျတဲ့ယုတျညံ့မှူကမနညျးမနောပဲပါလားကှယျရို့၊ အဲ့ဒါကရြောဘယျခေါငျစဥျအောကျထညျ့ပွီးcoverလုပျကွမလဲဟေ၊ပွညျသူတှဟေ၊အရှယျစုံလို့ရငျခှငျပိုကျရော၊သကျကွီးဖိုးဖှားရော၊တမွတေညျးလူလာဖွဈရတဲ့ဒုက်ခတှမြေားကှာဆိုပွီးသူမရဲ့InstagramStoryမှာရေးသားဖျောပွထားပါတယျ၊စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျပွနျလညျမြှဝတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။ crd
Live sale တခုမှာ ရေမွှေးနာမည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုအသံထွက်မှားသွားခဲ့တာကြောင့် ပိုစ့်တင်ပြီးလှောင်ပြောင်နေတဲ့ အမေရိကန်ရောက် ဆရာဝန်ဆယ်လီတဦးကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး..
Live sale တခုမှာ ရေမွှေးနာမည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုအသံထွက်မှားသွားခဲ့တာကြောင့် ပိုစ့်တင်ပြီးလှောင်ပြောင်နေတဲ့ အမေရိကန်ရောက် ဆရာဝန်ဆယ်လီတဦးကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး.. ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အခုလက်ရှိမှာ Live Sales ပေါင်းများစွာ လက်ခံရောင်းချပေးနေရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုချိန်မှာတော့ ဈေးရောင်း ရင်းဖြင့်သာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ဘယ်ရုပ်သံဌာန အသံလွှင့်ရုံမှာမှ သူကိုယ်တိုင် ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေကို သုံးစွဲခွင့်မပြုကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့ တေးရေးတေးဆို မောင်မောင်ဇော်လတ်…
မြန်မာပြည်က ဘယ်ရုပ်သံဌာန အသံလွှင့်ရုံမှာမှ သူကိုယ်တိုင် ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေကို သုံးစွဲခွင့်မပြုကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့ တေးရေးတေးဆို မောင်မောင်ဇော်လတ်… အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တေးသီချင်းပေါင်းများစွာရဲ့ နောက်ကွယ်က ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ၊ အဆိုတော် တစ်ဦးအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲနေရာယူထားသူတစ်ဦးကတော့ တေးရေးတေးဆို မောင်မောင်ဇော်လတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် ဂီတအနုပညာရှင် မောင်မောင်ဇော်လတ်ကတော့ သူရေးသားထားတဲ့သီချင်းတွေ သူကိုယ်တိုင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေကို သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေ၊
Raggae စတိုင်လ် စုံတွဲအချစ်သီချင်းလေးတပုဒ်ကို အစမ်းသီဆိုကြည့်နေတဲ့ခင်ပွန်းနံဘေးမှာ ခေးမေလို့ မထင်ရလောက်အောင် လှပတက်ကြွနေတဲ့ ခင်လွှမ်း….
442 | 17/01/2022
Raggae စတိုင်လ် စုံတွဲအချစ်သီချင်းလေးတပုဒ်ကို အစမ်းသီဆိုကြည့်နေတဲ့ခင်ပွန်းနံဘေးမှာ ခေးမေလို့ မထင်ရလောက်အောင် လှပတက်ကြွနေတဲ့ ခင်လွှမ်း…. သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ချစ်သူဘဝကတည်းက လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့စုံတွဲတွေအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ သက်မှတ်ခြင်းခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူဘဝမှာကတည်းက ရင်သွေးလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာပဲ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ဟာ သမီးလေးကိုလည်း
ပြည်သူတွေမျက်စိမနောက်စေမယ့် နည်းလမ်းနဲ့ သမာအာဇီဝကျကျ ဈေးရောင်းကာ ဝမ်းရေးကိုဖြေရှင်းနေကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ….
ပြည်သူတွေမျက်စိမနောက်စေမယ့် နည်းလမ်းနဲ့ သမာအာဇီဝကျကျ ဈေးရောင်းကာ ဝမ်းရေးကိုဖြေရှင်းနေကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ…. အွန်လိုင်းဆယ်လီဘရစ်တီတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်သာမက အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့လည်း အနုပညာလောကထဲမှာ ကျင်လည်နေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကျော်နန္ဒဟာ သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တကွ သူ့ရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိများသူတစ်ယောက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ လက်ရှိတစ်နိုင်ငံလုံး စိတ်ဆင်းရဲနေချိန်မှာ သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုထိန်းချုပ်ပြီး အလုပ်တွေကိုလည်း လျော့ပေါ့လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့ အနုပညာကြေး ရရှိငွေထဲမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြတဲ့ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်ရည်စူးပီး (၁၀)သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်…
” ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့ အနုပညာကြေး ရရှိငွေထဲမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြတဲ့ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်ရည်စူးပီး (၁၀)သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်…” ပရိသတ်ကြီးရေ မေလသံစဉ်ကတော့ မြန်မာသံစဉ် သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲ ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။ချိုသာတဲ့ အပြုံးလေးတွေအပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာပေါက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အဆိုပညာမှာလည်း အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တော်လွန်းသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ” အလုပ်​တွေမရှိ ဝင်​ငွေ
© 2022 မြန်မာဆယ်လီ သတင်းထူးများ .